Kazakhstan: Ny fiheverana ratsin’ireo bilaogera amin’ny fahavaratra · Global Voices teny Malagasy
Kazakhstan: Ny fiheverana ratsin'ireo bilaogera amin'ny fahavaratra
Mitovy amin'ny tranobe hipoky ny mpanofa i Kazakhstan.
Voadika ny 11 Oktobra 2019 20:26 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Jolay 2010)
Matetika dia vanimpotoana maty ho an'ireo mpampiasa aterineto manerana ny tany ny fahavaratra. Tsy mitsahatra manoratra ireo bilaogera Kazakh – manome fanaovangazetin'olontsotra vitsy kokoa, saingy mamokatra hevitra midadasika kokoa. Maneho ny heviny [ru] mikasika ny endriky ny toetsainam-pirenena Kazakh i Isabekov:
Iray amin'ireo fialamboly tian'ny olona indrindra ao Azia Afovoany ny “midera Kazakh”. Ireto manaraka ireto ny fitsipika amin'izany lalao izany: tsy maintsy midera izay Kazakh hitany ny Kyrgyz, na ny Tajik, na ny Uzbek. Tsy maintsy sady mikasika manokana ilay olona resahina ilay doka no mikasika ny firenena Kazakh iray manontolo ihany koa. Ohatra: “Milay sy manan-karena i Kazakhstan ary manana tany, menaka, “Contador” sy “cosmodrome” goavana, miaraka aminà vola fisotroan-dronono sy karama ambony be sns”. Amin'ny faran'ilay lalao, kotsa ny Kazakh iray ary afaka manao izay tiany ny Kyrgyz, na ny Tajik na ny Uzbek. Malaza be eo anivon'ny governemnta izany lalao izany.
Manahy [ru] ny amin-javatra iray hafa mampiavaka azy i Gde-Marat:
Manana tahotra diso tafahoatra ny hevi-bahoaka ny Kazakh. Miditra trosa, mivaro-pananana ary miaina anaty fahantràna izy ireo mba hialàna amin'ny fanilikilihana – indrindra rehefa mikasika ny “fandevenana mendrika” izany. Ny ratsy indrindra dia antsoin'izy ireo ho Finoana Silamo izany […] Inona no ilàna fandaniam-bola be ho an'ny maty? Tsy misy. Tsy misy teny mihitsy na iray aza milaza mikasika ny fandevenana makotroka ao anatin'ny Finoana Silamo. Maninona raha laniana hanaovana asa soa amin'ny anaran'ny maty izany vola rehetra izany? […]
Manao fampitahàna eo amin'ny trano fonenany sy ny fahatongavantsain'ireo olompirenena i Sadenova [ro]:
Ratsy be ilay trano – simba, rava, feno fako ary feno tseroka. Tsy afaka manao na inona na inona ianao satria 85% an'ireo mponina ato dia mpanofa avokoa. Fotoana voafetra no ipetrahan-dry zareo ato ary tsy miraharaha ny trano sy ny hoaviny ry zareo. Tsy rariny izao. Manao izay afany ilay trano, tsy manisy fanavahana eo amin'ireo mpanofa sy ny tompony. Manome fialofana ho an'ny rehetra izy, mampiakatra sy mampidina ny rehetra anatin'ny solotohatra. Mitovy amin'izany ny zava-mitranga ao amin'ny firenena – be mpanofa be loatra.
Mino ireo mponina any Kazakhstan fa iray amin'ireo “mpanofa” ireo ny raharaham-barotra amin'ny fitrandrahana.
“Nolazaina aho fa amin-kalahelo sy hirifiry no ahatsarovan'ireo mpamokatra solitanintsika ny taona 2006, rehefa sady nisy ny fiakaran'ny famokarana solitany be indrindra sy ny vidiny. Angamba, nahafinaritra be ny nandany vola toy ny rano ka tsy mety adinon-dry zareo fahatsapàna izany mandraka androany. Olona sambatra – manana zavatra tsara ho tsaroina ry zareo, tsy toy ny ambin'ny mponina”, hoy ny voasoratr’i thousand-pa.
Sokajy iray hafa amin'ireo “safidin'ny firenena” izay matetika heverina ho toy ny vesatra ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta. Nofidiana nandritra ny fifidianana halatra (tsy nisy noheverin'ny OSCE ho nalalaka sy marina ireo vato rehetra teo amin'ny tantaran'i Kazakhstan; nihena hatrany ary efa haotra ankehitriny ny isan'ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko mpanohitra), kely ny heriny ary ireo hetsika fisantarana mandambolambo hafahafa no matetika manahirana azy. Iray amin'ny hevitra toy izany ny fandraràna araka ny lalàna ny fanalàna zaza. Maneho ny heviny [ru] i Ellenbarkin:
Manizingizina ny tsy tokony hikobonan'ireo solombavambahoaka ireo amin'ny fepetra zara fa vita aho. Tokony handrara araka ny lalàna ny fikasikasihana ny fananahan'ny tena koa ry zareo – izay toy ny endrika fanalàn-jaza – ary hampiditra fanamelohana ho faty ho an'izany